I-COCOON B&B/Ukutshona kwelanga/Ngebalcony/Kufuphi neSitrato sokutya iWanda High-speed Railway/100-intshi ingqikelelo ecace kakhulu/iinkwenkwezi ezintlanu/cofa ukubona ezinye izintlu - I-Airbnb
I-COCOON B&B/Ukutshona kwelanga/Ngebalcony/Kufuphi neSitrato sokutya iWanda High-speed Railway/100-intshi ingqikelelo ecace kakhulu/iinkwenkwezi ezintlanu/cofa ukubona ezinye izintlu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCocoon
Igama lehotele yi "COCOON", oku kuthetha ukuba i-silkworm cocoon
Ekhaya, njengeqokobhe elifudumeleyo elisikhuselayo
Sikwazimisele ukwenza zonke iindwendwe ze-COCOON zive intuthuzelo kunye novuyo lokubuyela ekhaya
Igumbi1 ukutshona kwelanga
Ukuqala kwezona zixhobo zilula kakhulu, kuya kukuthatha ukubaleka ukukhazimla kwesixeko, ubuyele kokwenyani, kwaye ukonwabele umzuzu wokutshona kwelanga okumnandi...
Ngexesha lokuphumla: Sikubonelela ngoomatrasi kunye nemiqamelo yenkumbulo ekhululekileyo, kwaye kukho imiqamelo emithathu eyahlukileyo onokuthi ukhethe kuyo.
Xa uhlamba: Sikunika iitawuli zobuso ezilahlwayo, iipads zomqhaphu, izitikha ze-bangs kunye neebhendi zerabha, njl., ukuze ukwazi ukukhulula ukudinwa kosuku.
Ngexesha lokuphumla: Kukho i-100-intshi ecacileyo ecacileyo, ungawonwabela amava esikrini esikhulu ngelixa ulele ebhedini.
Xa utshintsha iimpahla: silungiselele isixhobo sokuncamathelisa i-roller, isichebi sebhola yeenwele, kunye nomatshini woku-ayina obanjwa ngesandla ukukunceda uhambe kakuhle.
Xa udlala: Sinesona sikhokelo sokutya seLeshan sinyanisekile, kwaye indawo yokuhlala kufuneka izame izindululo zokuthatha ngokwakho, ukuze uze ubuye eLeshan, ikomkhulu legourmet.
Indawo yehotele iphezulu kwaye ukuthutha kulula. Kukuhambo lwemizuzu eli-10 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe esinesantya esiphezulu, isikhululo sebhasi, iJiaxing Road Food Street, kunye neWanda Commercial District.
Indawo yokuhlala inezixhobo ezipheleleyo, kungekuphela nje i-100-intshi yeprojekti ecacileyo, kodwa kunye nomatrasi weenkwenkwezi ezintlanu kunye nemiqamelo emithathu eyahlukileyo onokuthi ukhethe kuyo. Silungiselele ii-ayini eziphathwa ngesandla, iipads zomqhaphu, iitawuli zobuso ezilahlwayo, iipadi zangasese ezilahlwayo kunye nezinye izinto ezincinci eziyimfuneko kuwe, xa uzifuna ngamaxesha athile.
Ukucocwa kunye nokubulala iintsholongwane kwindawo yokuhlala kungqongqo.Sithobela ngokupheleleyo umgaqo osisiseko womthengi omnye, indawo enye.Ukucocwa kunye nokucocwa kwenziwa yinkampani yokucoca yochwephesha.Ngaxeshanye,imigangatho engqongqo yococeko kunye neyokubulala iintsholongwane iye yaqulunqwa. Nceda uzive ukhululekile ukuhlala.
Umbuki zindwendwe ngu- Cocoon
Nceda wongeze iinkcukacha zoqhagamshelwano zabasebenzi benkonzo yabathengi phambi kokuba ungene
Siza kukuthumelela imiyalelo yokungena
Ngosuku lokungena, abasebenzi benkonzo yabathengi baya kukwazisa ngenombolo yegumbi kunye nekhowudi yomnyango
Ngosuku lokungena, abasebenzi…